एनसेलले ल्यायो चार वटा अफरहरु, रिचार्जमा ५० प्रतिशत बोनस - Aarthiknews
मंगलबार, १८ चैत्र २०७६ Tuesday, 31 March, 2020
काठमाण्डौं । विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस रोग (कोभिड १९) ले आफ्नो कार्यस्थल नगई प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरबाटै काम गर्न सक्षम हुनुपर्ने नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । सञ्चार सेवाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै एनसेलले सञ्चार सेवाको पहुँचलाइ अझै सरल र सुलभ बनाउँदै ग्राहकका लागि एनसेल सापटी रकममा वृद्घि, निःशुल्क ब्यालेन्स ट्रान्सफर सेवा, रिचार्जमा ५० प्रतिशत बोनस र स्टे होम प्याक ल्याएको छ ।
ब्यालेन्स ट्रान्सफर सेवा अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले एनसेल नेटवर्क भित्र रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य तथा साथीभाइलाई आफ्नो मेन ब्यालेन्सबाट निःशुल्क रुपमा ब्यालेन्स रकम उनीहरुको मोबाइलमा पठाउन तथा उनीहरुबाट प्राप्त गर्न पनि सक्नेछन् । हालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी ब्यालेन्स ट्रान्सफरको सिमा एक दिनमा अधिकतम ३ पटकबाट २० पटक पुर्याइएको छ ।
प्रिपेड ग्राहकले रु १० देखि रु ५०० सम्म आफ्नो मेन ब्यालेन्सबाट एनसेलको अन्य कुनै नम्बरमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् । ब्यालेन्स ट्रान्सफरबाट प्राप्त रकमबाट ग्राहकले कल गर्न, एसएमएस पठाउन तथा इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् । एस्ट्रि«क्स १७१२२ एस्ट्रि«क्स पाउने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर एस्ट्रि«क्स ट्रान्सफर गर्ने रकम ह्यास डायल गरी ग्राहकले निःशुल्क ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै एनसेल सापटी सेवा अन्तर्गतको सापटी रकमलाई बढाएको छ । यससँगै एनसेलका ग्राहकले विगतमा यो सेवा प्रयोग गरेको व्यवहारको आधारमा न्युनतम रु ४० देखि अधिकतम रु २०० सम्मसापटी लिन सक्नेछन् । आफ्ना परिवार तथा साथीभाइसँग सम्पर्कमा रहन यदि आफ्नो मेन ब्यालेन्स नपुग भएमा ग्राहकले एस्ट्रिक्स९९८८ह्यास डायल गरी मात्र रु २ सेवा शुल्कमा सापटी लिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै एनसेलले हरेक रिचार्जमा ५० प्रतिशत सम्म बोनस पाइने योजना पनि ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले रु ५०, रु १००, रु२००, रु ३००, रु ५०० र रु १००० को रिचार्जमा ५० प्रतिशत बोनस प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्राप्त बोनस रकम एनसेल नेटवर्क भित्र कल गर्न, एसएमएस गर्न र इन्टरनेट चलाउन प्रयोग गर्न सक्नेछन् । जस्तै यो योजना अन्तर्गत रु ५० रिचार्ज गर्ने ग्राहकले बोनस स्वरुप रु २५ प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै रु ५०० रिचार्ज गर्ने ग्राहकले बोनस स्वरुप रु २५० प्राप्त गर्नेछन् । बोनस रकम सोहि दिनको मध्य राती सम्म मान्य हुनेछ ।
यति मात्र हैन, यस विपद्को घडीमा कार्यलयको कामकाज घरबाटै पुरा गर्नुपर्ने ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै एनसेलले १५ जिबी डेटा भोलुम सहितको स्पेशल डेटा प्याक स्टे होम प्याक ल्याएको छ । ग्राहकले कर बाहेक मात्र रु २३० (कर सहित २९३.६९) मा यो प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । यो डेटा प्याकमा रहेको १५ जिबी डेटामा १० जिबी डेटा सबै नेटवर्कमा (टुजी, थ्रिजी र फोरजी) मा लागु हुनेछ भने ५ जिबी डेटा फोजी नेटवर्कमा मात्र लागु हुनेछ । यो प्याकको समयावधि सात दिनको रहेको छ र ग्राहकले मध्यरात देखि बेलुका ६ बजेसम्मको समयमा डेटा प्रयोग गनपर्ने हुन्छ ।
ग्राहकले एस्ट्रिक्स१७१२३ह्यास डायल गरी स्टे होम विकल्प छनौट गरी यो प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । प्याक अन्तर्गतको डेटा भोलुम सकिएपछि विद्यमान पे एज यु गो अनुसारको डेटा शुल्क लाग्नेछ । एनसेलको यो योजना अन्तर्गतको सबै अफरहरु ३० दिनका लागि संचालनमा रहनेछ ।
लकडाउनको बेलामा मोबाइल रिर्चाज गर्ने तरिका
पूर्वी एशिया क्षेत्रको पर्यटन व्यापारमा ठूलो खतरा उत्पन्न हुनेः विश्व बैंक
भारतमा कोरोनासँग जुद्न सहयोग गर्ने बढ्दै, प्रख्यात गायिका लता मंगेशकरद्वारा भारु २५ लाख सहयोग
विदेशबाट आएकाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न आग्रह
पूर्व राजपरिवरले पनि कोरोना कोषमा २ करोड सहयोग गर्यो
फागुन महिनामा सर्वाधिक शेयर कारोबार गर्ने दश कम्पनी
प्रदेश न १ अहाय र ज्यालादारी मजदुरका लागि राहत ल्याउने, सूचना मोवाइल एप्लिकेशनबाट
निजी अस्पतालबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउः सर्वोच्च
कोरोना रोकथाम कोषमा साना किसान लघुवित्तद्धारा १० लाख सहयोग
सीआईटीद्धारा १ करोड २१ लाख कोरोना कोषमा सहयोग
सनराइज बैंकद्धारा पीपीई उपकरण सहयोग
१०० थान पीपीई लाँदा अस्पतालमा ५० थान मात्रै कसरी पुग्याे ?
सवारी पास चाहियो ? अब यी चार ठाउँमा जानुस्
आजदेखि घुम्ती सेवामार्फत ग्यास वितरण
गायिका कनिका कपूरको पाचौँ रिपोर्ट पनि पोजेटिभ
आगामी सात दिन कहाँ कहाँ खुल्छन् कृषि विकास बैंक (फोन नम्वरसहित)
भारतमा गरिब मजदुरको समूहमाथि किटनाशक छर्किएपछि विवाद
चीनको वुहानमा लकडाउन खुल्यो
बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्बको तरलता, बैंकहरूलाई राहत
अफगानी नेताको रबैयाबाट अमेरिका बेखुशी, १ अर्ब डलर सहयोग कटौती गर्ने घोषणा